अमेरिकाको बर्चश्व समाप्त गर्ने चीनको अर्को अभियान – eSidhakura
र्‍या’पर भि’टेनलाइ खो’ज्दै प्रहरी !
बिदेशमा हुनुहुन्छ ? अब खाजा खाने पैसाले घर किन्नुस् ! १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पूरै घर !
प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा कांग्रेससँग मिलेर ओलीबि’रुद्ध अ’विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी!
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियअमेरिकाको बर्चश्व समाप्त गर्ने चीनको अर्को अभियान
अमेरिकाको बर्चश्व समाप्त गर्ने चीनको अर्को अभियान
वेनचाङ । अन्तरिक्ष विज्ञानमा नि’रन्तर फ’ड्को मा’रिरहेको चीनले बिहीबार पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगलग्रहको अध्ययन गर्न एउटा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले पनि मंगलग्रहको अध्ययनका लागि आगामी जुलाई ३० मा अर्को अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ । दुबै मुलुकबीच अथाह खगोलीय पिण्डहरुको खोजीमा अहिले प्र’तिस्पर्धाकै स्थिति उ’त्पन्न भएको छ । चीनले आफ्नो मंगल अ’भियानलाई ति’यानवेन–१ (‘स्व’र्गको जि’ज्ञासा’) नाम राखेको छ ।चीनको हेनान प्रान्तबाट प्र’क्षेपण गरिएको यस या’नलाई ल’ङमार्च ५ बाट प्र’क्षेपण गरिएको थियो ।
प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै इन्जिनियर र अरु कर्मचारीले खुशीयाली साटासाट गरेका थिए ।साइट क’मान्डर झा’ङ झु’युले राज्य संचालित सिसिटिभी टेलिभिजनबाट प्र’क्षेपण अ’भियान सफल भएको घो’षणा गरेका थिए । पाँच ट’न व’जनको ति’यानवेन–१ करिब सात महिनापछि फेब्रुअरी २०२१ मा ५ करोड ५० लाख किलोमिटरको यात्रा गरेर पृथ्वीमा फ’र्कने छ । यस मिसनमा एउटा मा’र्स अ’र्बिटर, एउटा ल्या’न्डर र एउटा रोभर रहेको छ । यी उपकरणको म’द्दतबाट मंगल ग्रहको माटोको अध्ययन गरिने चिनियाँ वै’ज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
हा’र्वर्ड–स्मिथसोनियन सेन्टरका अन्तरिक्षयात्री जो’नाथन म्या’डावेलले चीनले पहिलो पटक गरेको यस प्रयासबाट ठूलै उपलब्धि हा’सिल भइहाल्नेमा अहिल्यै आ’शावादी हुन नसकिने बताए । उनले अमेरिकाले पनि यस्तो परीक्षण पहिल्यै गरिसकेको बताए ।मंगल खोज अ’भियानमा अरु पनि मुलुक सहभागी हुन थालेका छन् । संयुक्त अरब इ’मिरेट्स (युएई) ले पनि गत सोमबार एउटा यान जापानबाट प्रक्षेपण गरेको छ । तर हे’र्नलायक मुख्य प्र’तिस्पर्धा चीन र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच नै हुनेछ । चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तरिक्ष खोजमा अमेरिकाको ब’र्चश्व समाप्त गर्ने प्रयासस्वरुप व्या’पक अ’भियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष अन्वेषण केन्द्र नासाले सन् १९९० को अन्त्यदेखि मंगल ग्रहमा चारवटा रो’भर यन्त्र पठाइसकेको छ । नासाले सन् २०३१ सम्ममा मंगल ग्रहबाट ढुंगा र बालुवाका नमुना संकलन गरेर पृथ्वीमा ल्याउने ल’क्ष लिएको छ । अन्तरिक्षयात्री म्या’डावेलले चीनको ति’यानवेन–१ मिसन नासाले सन् १९७५–७६ मा प्रक्षेपण गरेको भा’इकिङ समानको मात्र रहेको पनि बताए । सन् १९६० देखि शुरु भएका मंगल ग्रह अ’भियानमा हालसम्म अमेरिका, रसिया, युरोप, जापान र भारत सामेल भइसके पनि अधिकांश यी अभियान असफल भएका छन् । –एएफपी
बिहारका मतदातालाई सोनु सुदको आग्रह : भोटका लागि बटन औँलाले होइन, दिमागले थिच्नुहोस्
यूरोपमा कोरोना भाइरसको कारण मृ’त्युदर अघिल्लो हप्ताको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशत वृद्धि
कोरोनाबाट एक दिनमै झण्डै ५ लाख संक्रमित
मेसिसँग वि’वादपछि बार्सिलोनाका अध्यक्षसहित सबै वोर्ड सदस्यद्वारा सा’मूहिक रा’जीनामा
संक्रमण रो’क्न लकडाउन गर्नु पर्दैन: डब्लुएचओ
अमेरिकाले कोरोना म’हामारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने !